Iindaba -Imakethi ye-Asynchronous yeMakethi yokunyusa ingeniso yokujonga okuhle
Inguqulelo yamva nje ye-2020 yokufunda kwimakethi kwi-Asynchronous Motor Market equka i-103 eneetafile zedatha yentengiso, iitshathi, iigrafu, kunye namanani ekulula ukuwaqonda ngohlalutyo olunzulu.
Ubhubhane weCoronavirus (COVID-19) uchaphazele zonke iinkalo zobomi kwihlabathi liphela. Oku kukhokelele kutshintsho oluninzi kwiimeko zentengiso. Ingxelo igubungela imeko etshintsha ngokukhawuleza yentengiso kunye novavanyo lokuqala nefuthe elizayo.
Imoto ye-asynchronous, ekwabizwa ngokuba yimoto yokungenisa, yimoto yangoku etshintshayo. Ikhoyili ye-stator isebenzisa ukungeniswa kwe-electromagnetic ukuvelisa okwangoku kwi-rotor, kwaye i-motor ivelisa i-torque, ngoko akukho mandla asisigxina afunekayo. Iimoto ze-Asynchronous zingahlulahlulwa zibe ziikheyiji ezibhijelweyo kunye neekhetshi zoonomatse ngohlobo lweeviringi ezibiyelweyo. Uhlobo olucekeceke luhlobo lwesigaba esineemoto, kwaye uhlobo lwekhetsheya luhamba ngenqanaba lesithathu kunye nesigaba esinye semoto. I-Rotor ye-squirrel cage induction motor inokudityaniswa nokujikeleza kwangaphandle kwimoto.
Ngokophando kunye nokufunda, imakethi ibuzinzisile ubukho bayo kwihlabathi liphela. Uphando loPhando lweMakethi yezeMoto lubonelela ngovavanyo olubanzi lweNtengiso kwaye luquka imeko yexesha elizayo, izinto ezikhoyo zokukhula, izimvo ezijolise kuzo, iinkcukacha kunye nedatha yentengiso eqinisekisiweyo.
Abadlali beMakethi yeHlabathi, abaza kuvela kwaye boyise i-2020 kwi-Asynchronous Motor Market
Ukujonga kwi-2020, intengiso yehlabathi kulindeleke ukuba ibe ngunyaka obalulekileyo kwi-Asynchronous Motor Market malunga nokukhula kunye nengeniso.
Phantse zonke iinkampani ezidwelisiweyo okanye eziprofayiliweyo ziyahlaziya izicelo zazo zamava omsebenzisi kunye nokuseta iziseko zazo ezisisigxina ngo-2020. Le ngxelo igxile kwaye igxile kwezi nkampani kubandakanya iBosch Rexroth, ISIEMENS, TATUNG, Emerson, SHANDONG HUALI, ABB , STOEBER, GEORGII KOBOLD, SERVAX, TECO, Wolong, HITACHI, Bonda Industry, Dazhong, ANHUI WANNAN, YASKAWA, JLEM, Jiangte, JJE, SchabmÃ¼ller, AMK, HEIDENHAIN, XEMG, SPG, Ydmotor, Dongming, MONGMOR, -Beloit, ABM Greiffenberger.
Ngaphaya koko, uphando lunegalelo kwisishwankathelo sokwahlulwa kwenqanaba lommandla olwahlulahlulwe njengendawo ekhokelela kwinqanaba lokukhula kwenqanaba, amazwe anesabelo sentengiso esiphezulu kwimeko ezidlulileyo nezangoku. Olunye ulwahlulo lobume bomhlaba obabandakanyiwe kolu phando yiMntla Merika (Efihliweyo kwiSahluko 7 no-14), eUnited States, eCanada, eMexico, e-Yurophu (la aMahluko 8 nele-14), eJamani, e-UK, e-France, e-Itali, e-Spain, Rhashiya.
Uqikelelo lwemarike ye-Asynchronous Motor yokwandisa i-CAGR% ngo-2020 kunye ne-XXXX ekufanele ukuba ibe ngumxhamli omkhulu, ibekwe bhetele kune-ZZZZ yowama-2020.
Ukuhamba kwamacandelo amashishini amatsha kuyankqonkqoza ngonyaka we-2020 kwi-Asynchronous Motor Market
Ngokophando lwentengiso ye-AMR, iindlela zamva nje kumacandelo okhetho lwabathengi anje ngohlobo, isicelo siya kuba ngumceli mngeni ngakumbi. Intengiso yentengiso yecandelo le-Asynchronous Motor iya kucanda amanqaku e $ $ ngo-2020.
Ngokungafaniyo namacandelo ahlukanisiweyo aphumelele kolu shishino njengodidi (Isigaba esithathu se-Asynchronous Motor, Isigaba esinye se-Asynchronous Motor) nangabasebenzisi bokuphela / isicelo (Izixhobo zoMatshini, ukuSonga okuNcinci, izixhobo, iiPompo, oomatshini bokuKhanya, iMetallurgical, oomatshini bezemigodi, Abanye).
Inguqulelo yowama-2020 yesifundo semakethi ye-Asynchronous Motor kukuqhubeka ukwahlulahlula / ukucutha ukuqaqambisa ukuvela okutsha kweshishini.
Ukuziphatha kwabathengi kunye nokutshintsha okukhethiweyo, Zivuma njani iinkampani zeMoto ezi-Asynchronous?
Ngenxa yotshintsho kukhetho lwabathengi ngoqwalaselo kuthengiso lwamva nje kunye nengxelo yengeniso, Abathengisi abakhulu kwimakethi yeHlabathi bazama ukufumana ingqalelo yabasebenzisi-misebenzi okanye abathengi "ngezeMinikelo kunye neenkonzo ezongezelelweyo".
Ngokusebenzisa itekhnoloji yakutshanje kunye nohlalutyo kwicala lokufuna, abadlali abaphambili bafumana indlela yokuziphatha yabathengi kunye nokukhetha kwabo okuguqukayo.
Kwakhona, iifemu ezinkulu zotyalo-mali okanye iingxilimbela zikulungele ukubeka imali eninzi ukuze ifumane ukusebenza komdlali ophambili kwintengiso yezicelo ezitsha okanye iimveliso.
Ukubuza nokuphonononga ubungakanani bemakethi ye-Asynchronous yeemoto yimimandla / amazwe abalulekileyo, uhlobo lwemveliso kunye nokusetyenziswa, idatha edlulileyo ukusuka kwi-2014 ukuya kwi-2018, kunye nokuqikelela okanye ukuqikelela ku-2026.
Ukwazi ubume be-Asynchronous Motor Market ngokuqonda amacandelwana ayo amaninzi.
Ukujolisa kubadlali abaphambili beemakethi zeMoto, ukumisela, ukuchaza kunye nokuhlalutya ixabiso, isabelo sentengiso, ukhuphiswano lwembonakalo yelizwe, uhlalutyo lweSWOT, kunye nezicwangciso zophuhliso kule minyaka imbalwa izayo.
Ukutolika imakethi ye-Asynchronous Motor malunga neendlela ezithile zokukhula, ithemba, kunye negalelo labo kwintengiso iyonke.
Ukwabelana ngolwazi oluneenkcukacha malunga nezinto eziphambili ezichaphazela ukukhula kweemarike (amandla okukhula, amathuba, abaqhubi, imiceli mngeni ethile kunye nemingcipheko).
Ukwenza iprojekthi ubungakanani be-Asynchronous Motor Market, ngokubhekisele kwimimandla ephambili, uhlobo kunye nokusetyenziswa.
Ukuchaza inkqubela phambili yokhuphiswano njengokwandiswa, izivumelwano, ukwaziswa kwemveliso entsha kunye nokufunyanwa kwintengiso kunye nokunye okuninzi.
Uhlalutyo lwempembelelo ye-COVID-19 kwi-Asynchronous Motor Market
Enkosi ngokufunda eli nqaku, unokufumana isahluko ngasinye sesahluko sobulumko okanye iinguqulelo zengingqi zobulumko ezinje ngeNyakatho Melika, iNtshona / iMpuma Yurophu okanye uMzantsi mpuma weAsia.
Ngedatha yentengiso enikiweyo, uPhando kwiiMakethi zeHlabathi lubonelela ngokwezifiso ngokweemfuno ezithile. Bhala kwi-AMR